Debian 10.9 Inouya neSBAT ​​Tsigiro yeFWUPD Mapakeji uye Kuchengetedza uye Kuvandudza Kwekuita | Linux Vakapindwa muropa
Bullseye parizvino ari muHard Freeze, inotonhodza kupisa kupfuura yekupedzisira asi yakaderera pane yapfuura. Yegumi neimwe ichave iri inotevera vhezheni yeimwe yakakosha masisitimu eLinux anoshanda, pane iyo Ubuntu yakavakirwa uye, nekuwedzera, akawanda ekuparadzira. Asi kuti ivo vava padanho rekuvhurwa hazvireve kuti vatoisa parutivi izvo zviripo, uye chirongwa changotanga Debian 10.9.
Nhasi Kurume 27, Project Debian yaburitsazve imwe yemasuo iwayo mavari ivo havapi ruzivo rwakawanda, kupfuura kuzivisa kwekuwanikwa kweshanduro nyowani yehurongwa hwavo hwekushandisa. Ivo vanowanzo kunyevera kuti haisi vhezheni itsva zvachose, asi iyo ISO inounganidza nyaya dzese dzakaburitswa mumwedzi yapfuura. La mufananidzo wekare Yaiva Debian 10.8 uye yakasvika inenge mwedzi nehafu yapfuura.
Debian 10.9 haisi vhezheni itsva yeBuster
Debian 10.9 ndiyo yekupedzisira poindi yekugadziriswa kweiyo yakagadzika chiteshi, uye pakati pezvinhu zvitsva zvinomira pachena kuti inotsigira SBAT yeFWUPD mapakeji. Kune rimwe divi uye senguva dzose, ivo vakawedzerawo gadziriso inogadzirisa uye zvigamba zvekuchengetedza, saka zvinokurudzirwa kushandisa iyi itsva ISO kumisikidza nyowani. Iyo kernel ichiri 4.19, asi chirongwa-chakachengetedzwa vhezheni iyo inosanganisira epachizvino zvigamba. Pakati pezvimwe zvinhu zvitsva tinazvo chengetedzo yegore-init kudzivirira kuti isazivikanwe nemapassword akagadzirwa mumafaira akaverengeka emafaira uye zvigadziriso zveIntel CPU microcode.
Debian 10 yakatanga kuburitswa muna Chikunguru 2019 uye ichave iri inotsigirwa kwemakore mashanu, kunyanya kusvika gore ra5. Zvichakadaro, iri zhizha Debian 11 ichasvika, iyo vhezheni ichave inonyanya kuvandudzwa, asi icharamba iri kure nekupa nhau dzichangoburwa nekuda kwechengetedzo uzivi hwechikwata chayo chevagadziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 10.9 inouya neSBAT ​​rutsigiro rweFWUPD mapakeji uye chengetedzo uye kugadzirisa mashandiro
WINE 6.5 inosvika neyakavandudzwa OpenCL uye IE rutsigiro uye inopfuura mazana mana shanduko